သင့်အတွက် မနက်ဖြန်: Recent Posts Widgetထည့်မယ်
Recent Posts Widgetထည့်မယ်
Bloggerများစွာ Feed Widgetကို အသုံးပြုပြီး Recent Blog Postsတွေကို ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ဒါကို ဘယ်လိုထည့်ကြမလဲ?
အောက်ပါ Boxထဲတွင် လိုအပ်သောအချက်အလက်များကို ထည့်ပါ။
၁။ Widget Titleကို ပြောင်းနိုင်သည်။
၂။ သင်၏ Blog URLကိုထည့်ပါ။ URLကို ထည့်သောအခါ (http://) ကို မထည့်ပါနှင့်။ ဒီလိုဆို (http://to4you.blogspot.com/) မှားပါသည်။ (to4you.blogspot.com)ဆို မှန်ပါသည်။ Boxရဲ့အပေါ်တွင် ရေးပြထားပါသည်။ Your Blog URL (without the http://).
၃။ Number of Posts to display၌ Post ခေါင်းစဉ်အရေအတွက် ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ ပုံသေအားဖြင့် ၁၀ သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ၁၀ထက် မများလျှင်ကောင်းမည်။
၄။ Customize buttonနှိပ်ပါက Saveလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
၅။ Add toaBlog buttonနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် Windows အသစ်ထွက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ၄င်းနောက် ADD Widget buttonနှိပ်လိုက်ပါ။ မိမိ၏ Blogထဲသို့ Widget၀င်သွားပါပြီ။ မိမိထားလိုသောနေရာတွင် ထား၍ Save လုပ်လိုက်ပါ။
Create Your Recent Posts Widget
Your Blog URL (without the http://): /feeds/posts/default